जमैकामा खेलिने जुवा कानूनहरू २०१२ मा क्यासिनो गेमि Act ऐनको साथ परिमार्जन गरिएको थियो।
अब, यस सुन्दर क्यारिबियन टापु राष्ट्रमा १२ भू-भूमि क्यासिनो र ईंट र मोर्टार स्पोर्ट्सबुक रहेको छ।
क्यासिनो गेमि Commission आयोग लाइसेन्सिंग र नियमहरूको कार्यान्वयनको जिम्मामा छ।
अनलाइन शर्त उद्योग पनि जीवित र राम्रो छ तर यो कानूनी रूपमा मात्र गैर-निवासीहरूलाई उपलब्ध छ।
जमैका नागरिकहरूलाई भाग लिन निषेध गरिएको छ तर अधिकारीहरूले भाग लिनेहरूलाई सजाय दिदैनन्।
जमैकन खेल शर्तकर्ताहरूले अझै पनि कानुनी रूपमा जग्गा-आधारित स्पोर्टबुकमा दांव लगाउन सक्छ।
शीर्ष १० जमैकन अनलाईन क्यासिनो साइटहरू एक नयाँ बोनसको साथ!
शीर्ष १० जमैकन अनलाईन क्यासिनो साइटहरूको बारेमा एक विशाल बोनसको साथ!
जब अनलाइन क्यासिनोको क्षेत्रको कुरा आउँछ भने जमैका सरकारले अब नयाँ नियमनको विस्तार गरिरहेको छ जसले स्थानीय बासिन्दाहरूलाई इन्टरनेटमा जुवा खेल्न अनुमति दिनेछ। उही समयमा त्यहाँ धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सर्वश्रेष्ठ क्यासिनो वेबसाइटहरू छन् जुन यस देशबाट आएका आगन्तुकहरूलाई स्वागत गर्दछन्। तर एउटाले कम र उच्च गुणको जमैका क्यासिनो साइटहरू बीच भेद लिन सक्षम हुनु आवश्यक छ।
यदि तपाईं जमैका खेलाडीहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो अनलाइन क्यासिनोहरूको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने जुवा प्लेटफार्महरूको हाम्रो सूची जाँच गर्नुहोस् जुन यस क्यारिबियन देशबाट आगन्तुकहरूलाई स्वागत गर्दछ। थप रूपमा, हामी तपाईंलाई सबै मापदण्डहरू देखाउँदैछौं जुन राम्रो अनलाइन क्यासिनो जमैका आधारित जुवा खेल्न सक्ने छनौट गर्न प्रयोग गरिन्छ।
तल हामी तपाईंलाई अनलाइन जूवा जमैकामा आधारित जुवा खेल्ने सबै आवश्यक कानूनी जानकारी यहाँ बताउनेछौं यहाँ इन्टरनेटमा जुवा खेल्न सुरु गर्नु अघि। हाम्रो गाईडमा हामी तपाईंलाई आईजीमि sector्ग क्षेत्रको वर्तमान प्रवृत्तिहरूको बारेमा पनि बताउने छौं जुन भविष्यमा जमैकन अनलाइन क्यासिनो स्थलहरूको विकास हुने तरीकालाई परिभाषित गर्न जाँदैछन्। उदाहरण को लागी, तपाईं कसरी एक अनलाइन क्यासिनो जमैका वास्तविक पैसा (उदाहरण JMD) बिटकोइन, altcoin र अन्य लोकप्रिय cryptocur मुद्रा को साथ विस्तार गरीरहेको छ को एक राम्रो समझ प्राप्त गर्न सक्षम हुनेछ।
जमैका मा जुवा
जमैकाको लोकप्रिय क्यारिबियन पर्यटन गन्तव्य जुवाको सन्दर्भमा एक जटिल कानूनी कोड छ, केही फारमहरू कानुनी छन् जबकि अरूहरूलाई निषेध गरिएको छ। भूमिमा आधारित क्यासिनो केही समयको लागि कानुनी भएको छ तर सन् २०१० पछि मात्र कानुनी रूपमा टेबुल गेमहरू प्रदान गर्न सक्षम भएको छ। क्यासिनोले अहिले टेबल खेलहरू प्रस्ताव गर्न सक्दछ तर कम्तिमा २,००० कोठा प्रस्ताव गर्ने होटेलहरूको भित्र अवस्थित हुनुपर्दछ।
जमैकाका नागरिकहरूका लागि अनलाइन जुवा अवैध छ। यद्यपि, सरकारले विदेशी ग्राहकहरूलाई सेवा प्रदान गर्ने अनलाइन जुवा प्रदायकहरूको लागि इजाजतपत्रहरू प्रदान गर्दछ। थप रूपमा, यो रिपोर्ट गरिएको छ कि धेरै जमैका नागरिकहरूले अनलाइन जुवा साइटहरू अवैध रूपमा प्रयोग गर्छन्।
जमैकामा अनलाइन जुवा
जमैका बेटिंग, गेमि and र लटरी आयोगले अनलाइन क्यासिनो प्रदायकहरूलाई लाइसेन्स जारी गर्दछ। यद्यपि यो नागरिकहरूलाई अनलाइन जुवा खेल्न हाल अवैध छ। यद्यपि धेरै जमैकनहरूले गैरकानूनी भए पनि लाइसेंसविहीन र विदेशी सञ्चालित जुवा साइटहरू प्रयोग गर्छन्।
घरेलु इजाजतपत्र प्राप्त साइटहरूले विदेशी ग्राहकहरूलाई मात्र सेवा दिन सक्दछन्। यो रिपोर्ट गरिएको छ कि वर्तमानमा जमैका, पोकर वर्ल्डमा केवल एक जुवा साइट इजाजतपत्र छ।
शीर्ष १० जमैकन अनलाईन क्यासिनो साइटहरू अपडेट गरिएको: जुन 3, 2020 लेखक: Damon
1 शीर्ष १० जमैकन अनलाईन क्यासिनो साइटहरू एक नयाँ बोनसको साथ!
1.1 शीर्ष १० जमैकन अनलाईन क्यासिनो साइटहरूको बारेमा एक विशाल बोनसको साथ!
2 जमैका मा जुवा
3 जमैकामा अनलाइन जुवा
शीर्ष १० जमैकन अनलाइन ...